အဆိုပါ 3,5 KARDEMİRတန်ချိန်သန်းထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်တွင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး78 Karabükအဆိုပါ 3,5 KARDEMİRတန်ချိန်သန်းထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်ထဲမှာ
အဆိုပါ 3,5 KARDEMİRတန်ချိန်သန်းထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်ထဲမှာ
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 78 Karabük, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တူရကီသမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူမဟာခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Ataturk အဆိုပါထုတ်ပယ်ခံရKARDEMİRအသုံးပြုပုံထိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်İsmetİnönüအခြေခံ၏3ဧပြီလ 1937 သမိုင်းကို "အမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးဟာအပြောင်းအရွေ့" ကိုစတင်, Fatma9စက်တင်ဘာလ 1939 နှင့်ပထမဦးစွာတူရကီသံ 10 အတွက်ပစ်ခတ်ပထမဦးဆုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲဖြစ်ပါသည် စက်တင်ဘာလ 1939, 80 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအတိအကျတူမီးဖို၌အမြင့်ဆုံးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KARDEMİRနောက်ကွယ်မှနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကျန်ရှိသောအရည် Hamdemir 80 51,5 သန်းတန်ချိန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
တနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းသံမဏိထုတ်လုပ်မှု 1937 တန်ချိန်သန်းအဖြစ်စံချိန်တင်ပေါ်ဖြတ်သန်းနေ 135 အတွက်KARDEMİRစတင်ထုတ်လုပ်မှု 1939 ယခုနှစ် 137 တထောင်အရာကြွင်းလေ၏ 10 လအတွင်း 1939 စက်တင်ဘာလပထမဦးဆုံးတာကသံ 2,5 ကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သည်, KARDEMİRအခြေခံ 13 တန်ချိန်သန်းတင်ကြ၏ တူရကီအရည် Hamdemir တန်ချိန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်စုစုပေါင်းအရည်ထုတ်လုပ်မှု 1939 ဝက်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသံမဏိကဏ္ဍ 2018 1 808 အတွက်နောက်ကွယ်မှတူရကီ၏ 37,5 တန်ချိန်သန်းသန်းဘီလီယံအထိတန်ချိန် left, Kardemir အဆိုပါ2413 ရေနံစိမ်းသံမဏိထုတ်လုပ်မှု၏တထောင်တန်ချိန်သန်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ဧပြီလ31937 သမိုင်းဝင်KARDEMİRဘဝတိုက်မြစ်ကိုချနေတဲ့ဂေါ်ပြားမော်တာတွေ့, ကြီးမားတဲ့အလုပ်ပြောင်းလဲပြီးနောက် 82 နှစ်ပေါင်းဥရောပ 8 စဉ်, ယနေ့တူရကီ2ယနေ့ကမ္ဘာတွင်ကြှနျုပျတို့အားလုံးဝါကြွားမည်။ ဒါဟာအကြီးဆုံးသံမဏိထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဤကွီးစှာသောကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး, အသီးအသီးဖောက်သည်လက်ခံရရှိကြောင်းအလုပ်သမားသံသယများနှင့် Karabuk အတွက်
ဤအခါသမယတွင်, Kardemir Karabükအတွက်ဖန်တီးမှုခွင့်ပြုလုသောငါတို့အမျိုးသားရေးစက်မှု drive ကို, အထူးသဖြင့် Gazi Mustafa Kemal Ataturk, နှောင်းပိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Ismet Inonu ဖွငျ့တငျပွီးလြှငျအခြေခံပထမဦးဆုံးမော်တာ၏အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံKarabükသံနှင့်သံမဏိစက်ရုံ၏တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ယနေ့တဝိုက်သို့ရောက်လာသည် ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အတူသတိရသည်အထိအသက်ရှင်လျက်စောင့်စေခြင်းငှာမိမိတို့၏လုပ်အားနှင့်ချွေးလှူဒါန်းခဲ့သူကိုလူတိုင်းက။ ရှေ့ဆက်ဖို့ပိုနေဆဲ Learn စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ထံမှလက်ခံရရှိအလံကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏နှင့်စိတ်ကိုအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏န်ထမ်းမှချွေးထွက်လျက်သွန်းလောင်း။
တူရကီ၏အကြီးဆုံးစက်မှုဇုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်KARDEMİRယနေ့ 23 ။ ဒါဟာအဆင့်။
အထူးသဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဘီလီယံကို $ 's ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်. ယခုနှစ် 2010 1,3 ပြီးနောက်KARDEMİR, နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်မတူကွဲပြားမှုလြှော့။
ရထားလမ်းဘီးထုတ်လုပ်မှုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဦးတည်းလာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်KARDEMİR, တူရကီ၌မသာသတ္တုရိုင်းအဆောက်အဦကနေချောကုန်ပစ္စည်းများသည်အထိဘက်ပေါင်းစုံအတွက်ရထားလမ်းဘီးကိုထုတ်လုပ်ကမ္ဘာကြီးကိုအနည်းငယ်ထုတ်လုပ်သူအကြားဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ် TCDD နှင့်အတူရထားလမ်းတူရကီအတွက်ရထားလမ်းစည်းရုံးခြင်းနောက်ထပ်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မယ်။
ချောင်းကို coil ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦ, အထူးသဖြင့်မော်တော်ကား, ပရိဘောဂ, ကရိယာ, ထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်လက်အဖြစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကလိုအပ်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုဘို့ငါတို့အလုပ်။ မြင့်မားသောဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုထုတ်ကုန်နှင့်အတူKARDEMİRရုံကျနော်တို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပို့မှုတိုးမြှင့်ဖို့အစေခံပါလိမ့်မယ်။
ဒါရိုက်တာKARDEMİRဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် '' ၏ 3,5 တန်ချိန်သန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါ steelworks ၏အဆုံးအားဖြင့်ပြီးစီးအဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ 2,9 တန်ချိန်သန်းစတင်ခဲ့ပြီးစွမ်းရည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်တဦးတည်းခြေလှမ်းနီးကပ်လာသည့်ပန်းတိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဝန်ကြီးဌာနနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှစ်မျိုးစလုံးကိုKarabükမြူနီစီပယ်နှစ်ဦးစလုံးပြီးစီးခဲ့ပြီး Kardemir ၏ကတိကဝတ်နှင့်အညီစတင်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်လူသိများသည်နှင့်အမျှ Kardemir, လူမှုရေးအသက်တာ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များတွေ့ဆုံဆီသို့ဦးတည်နိုင်အောင်ဝေးအလွန်အရေးကြီးသောလူမှုရေးတာဝန်ယူမှုစီမံကိန်းများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ Akdeniz ကလပ်အပန်းဖြေ Kardemir ပြတိုက်အဖြစ်လူသိများသည့်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အင်ဂျင်နီယာများ, Akdeniz အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံပွနျလညျထူထောငျတဲ့ပြဇာတ်ရုံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာအဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှု Re-တင်သွင်းဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦကိုပွနျလညျထူထောစီမံကိန်းများအတွက်အဘို့ပြင်ဆင်နေကြသည်ကပြတိုက်ဘို့ကုန်သွယ်စီမံကိန်းများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ရုပ်ရှင်ရုံပြဇာတ်ရုံနှင့် Akdeniz ၏ယဉ်ကျေးမှုစင်တာအဖြစ် configured လျှင်အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့၌စိတ်ဝိညာဉ်အားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေစက်မှုယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမြော်အမြင်အလားအလာနှင့်အတူKARDEMİR, ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား, လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သမ္မတနိုင်ငံ 100 ၏အောင်မြင်မှုဖမ်းဆီးဖို့ကျနော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာ၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်များသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် oriented ချဉ်းကပ်မှုတိုးမြှင့်, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့တနျဖိုးထည့်ပါ။ 2023 ပစ်မှတ်အထောက်အကူပြုဆက်လက်တံ့သောတစ်နှစ်တာ။
15.000 0-8 မီလီမီတာတန်ချိန်; နုအတွက် 5.000 8-16 မီလီမီတာတန်ချိန်နှင့်တန်ချိန် 12.500 16-32 မီလီမီတာစုစုပေါင်းဝယ်ယူ 07 / 07 / 2012 ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူကော်မရှင်ဖုန်းနှင့်ဖက်စ် NO0 272 213 76 21-42070272 214 57 05 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 27 / 06 / 2012 လေလံရက်စွဲများ၏နူးညံ့သောလိမ့်မယ် UNIT AFYON ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံညွှန်ကြားမှုတင်ဒါ Response အမ် Nurettin UNC မှတင်ဒါADRESİAFYOကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် TIME က 17 / 07 / 2012 တွင် TIME: 14: 30 150 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် - လေလံဆွဲဝယ်ယူစာချုပ် SUBJECT ကို FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 78749 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို www.tcdd.gov.tr. ON £စျေးပြိုင် ဖိထားပါ DOWNLOAD ကြည့်ဖို့အတွက် (Afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.co ငါ) SPECIFICATION
တန်ချိန်ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်သန်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာ Kardemir321 / 07 / 2013 Kardemir3ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်မှတန်ချိန်သန်းပိုမိုနီးကပ်စွာ: Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) မှ General Manager Fadil Demirel ကပြောသည် "ငါတို့ထုတ်လုပ်မှု3တန်ချိန်သန်းရောက်ရှိရန်အလွန်နည်းနည်းအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ Demirel, AA ကိုသူတို့3သန်းတစ်တန်ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်ရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည်သတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူတို့ကဒီနှစ်ကုန်နေဖြင့်ဖြည့်စွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကတူရကီအတွက်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်၏2ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိ Capacity've ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မှု Us အတွက်4တန်ချိန်သန်းအောင်မြင်ရန်: ။ ။ ။ အဆိုပါစက်ရုံသည်လက်ရှိတွင်ကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3သန်း Demirel ကပြောသည်တန်ချိန်ရှိကြောင်းအဓိကထားနေသည် အနည်းငယ်သာ ...
3.5 တန်ချိန်သန်း / တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် Kardemir 11 / 08 / 2017 သစ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်းစက်ရုံ 3,5 တန်ချိန်သန်း / တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်ကကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီရေးသားထားသောကြေညာချက် လုပ်. , "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 3,5 တန်ချိန်သန်းဖယ်ရှားရေးတစ်အရည်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီးယင်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွင်းအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆက်လက်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ 2010 နှစ်ပေါင်းထံမှစတင်နှင့်အတူဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, 2,4 ၏အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ယနေ့သန်းတန်ချိန်ရောက်ရှိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရရှိနိုင်သော 90 တစ်တန် 1 အမှတ်2converters အဖြစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းရည် 120 တန်ချိန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပြီသမျှသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, ထုတ်လုပ်မှု၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာတပ်ဆင်ဖို့နောက်ဆက်တွဲ converters အဖြစ် 120 တန်ချိန်စွမ်းရည်များအတွက်စီစဉ်ပေးရန်တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ...
KARDEMİR, 41.500 Ray TCDD များအတွက်သေံထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ 16 / 02 / 2012 Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (KARDEMİR) Inc ကို, တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), သံလမ်း၏ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ဒါကုမ္ပဏီကအသင့်တော်ဆုံးလေလံဖြစ်နေဆဲကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လှေတျတျောမူ၏ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်KARDEMİR (PDP) ကပြည်သူ့ထုတ်ဖော်ပလက်ဖောင်း, '' 15 ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ဒါအတွက်ပါဝင်ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 နု၏အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲလေလံအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးတင်သွင်းထားပါတယ် '' ကြေညာချက်ကဆိုသည်။ အောက်ပါအတိုင်းကြေညာချက်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်: '22.500 60 ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတန်ချိန်နှင့်တန်ချိန် 1E19.000 49E1 900 အရည်အသွေးကိုသံလမ်းနု၏ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ဒါအတွက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး, အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲလေလံတင်သွင်းခဲ့ကြတော်မူသောငါတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်အပ်နှင်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 22.500 60 E1 တန်ချိန်နှင့်တန်ချိန် 19.000 49 1 အရည်အသွေး E900 ရထားလမ်းဧည့်ခံ 10 / 02 / 2012 နူးညံ့သောလိပ်စာဗဟိုကောင်းသော seckin H.NEV နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးဖုန်းနှင့်ဖက်စ် NO:0312 309 05 15 / 4129-43990312 နည်းလမ်းအမိန့်ညွှန်ကြားရေးမှူး (အထူးကော်မရှင်) စာချုပ်စွဲချက်ဒါရိုက်တာတင်ဒါတင်ဒါကိုယျစားလှယျဌာန 311 53 05 ANNOUNCEMENT: DATE 09 / 01 / 2012 လေလံတင်သည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 15 / 02 / 2012 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION, PRICE: 500 - လေလံနှုန်း: ဖွင့်စျေးပြိုင်တင်ဒါ subject: ကိရိယာဝယ်ယူ FILE ကို NUMBER: 2011 / 205666 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို: malzemesiparis@tcdd.gov.t ပစ္စည်းများ Properties ပစ္စည်းများ AMOUNT ကို (ကီလိုဂရမ်) SPECIFICATION ဖြစ်ပါတယ် ...
OK ကို Kahramanmaras Osmaniye Access ကိုလမ်းမ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ 12 1869 အော်တိုမန်အစိုးရ
တန်ချိန်ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်သန်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာ Kardemir 3
3.5 တန်ချိန်သန်း / တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် Kardemir
KARDEMİR, 41.500 Ray TCDD များအတွက်သေံထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 22.500 60 E1 တန်ချိန်နှင့်တန်ချိန် 19.000 49 1 အရည်အသွေး E900 ရထားလမ်းဧည့်ခံ
Karatayd ပစ်မှတ် 250 တစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံး
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (365) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)